Ingabe ukuphila izimpethu e indoda? Othile uyokwenyuka aphendule umbuzo nemibimbi kwekhala kanye ukuhlanekezela ehlombe, futhi othile humorously wathi: "! Futhi lapha - ikhambi le nkinga yokuntuleka kwezindlu" Kuyinto ukuphendula kuyaqondakala elilodwa: namanje ngumbukwane ezingemnandi - izimpethu kumuntu (isithombe esihlokweni kulapho kakhulu uyazonga), nalapho esivulela ukumamatheka yabanye: lezi zinambuzane lihamba ngempela kwezitho (noma izicubu), bese-ke ngeshwa, abahlulekayo ukumphilisa.
akazange Uvelaphi izimpethu?
Iqiniso lokuthi lezi zibungu encane empeleni izibungu wezibawu, abaningi abawazi. Igama kungenzeka ngenxa yokwanda okusheshayo ezidala. Opara esabekwa uwayehlalise endaweni efudumele, iqala ukuba bubble futhi zikhula ngokushesha. baziphatha njengokungathi kahle futhi isibungu. Sikhula ngezinsuku eziyisihlanu izikhathi ezingaphezu kuka-200! izibungu imisiwe Okokuqala kungabonwa ngemva nje kosuku olulodwa kwenzeke.
izinsalela Organic ezikhanga izimpukane ngamandla Amazing. Uke waphawula yini ukuthi abasanda wabeka phezu kwetafula inyama eluhlaza kancane baqala flied fly? Lo muzwa sengathi iphunga booty engakunaki nokubhuza uzizwa amakhulu amamitha. I Okutholakale, okokuqala uzifunde ngokucophelela (fly ematfuba eside lapho kuvezwa, ecinga ekhoneni kancane esekusithekeni noma tastiest ucezu), bese lizalela amaqanda kuphela. Futhi kungase izimpukane ezahlukene (hhayi kuphela oluhlaza). Kuyaqapheleka ukuthi ukukhethwa izibungu uqale kakhulu kunonophisa luhlelo zokuwohloka.
Ezezindlu Inkinga ukwazi konakalisa hhayi kuphela abantu, kodwa futhi izimpethu. Uma emkhathizwe lagubuzela ngokuqondile kusukela tin izimuncagazi yokuhlala ngokushesha ngaphandle kokubuza kuhlale le square metres, ukuze akufake lutho. A wokusanhlamvu iqiniso kule ihlaya khona, kodwa itholakala ezijulile.
Iqiniso lokuthi izicubu efile begazi ihehe izinambuzane aphansi enza kulesi simo indima kwabahlengikazi. Baphi izimpethu e indoda? Mangisho ukuthi ukhanda ezingemnandi ezinjalo kuba akunakugwenywa izidumbu, isb. E. abantu Olufile. Lapha, isimiso, yonke into icacile - lokhu kuyinqubo engokwemvelo futhi ayidingi incazelo.
Kodwa kunezinto ngezinye izikhathi okungavamile - izimpethu mathupha ... bukhoma! It kuvela ukuthi izimo ezinjalo, yize ezingavamile, kodwa kusadingeka indawo ukuba. Ngaphezu kwalokho, bababukela azinakwenzeka ukuthathelwa umshuwalense.
Esinye sezizathu for ukubukeka ezidala bangaba inxeba ukopha noma esibhibhayo umkhankaso. Ikakhulukazi iyingozi, njengoba ungase ucabange, ehlobo, lapho eziningi izimpukane, ikakhulukazi. Kwanele ulale, kokushiya ukufinyelela isilonda, futhi kusihlwa ngosuku olulandelayo phezu ezilimele indawo ukopha kungase kubonakale amachashazi ongaziwa mhlophe ... ukuvikela can ukwelashwa ngokucophelela kuphela, ukunqunywa amabhandeshi futhi bandaging.
Izimpethu umuntu, ukuba baphile, ngokusebenzisa izinto. It kuvela ukuthi iqophelo izimpukane grey yokuzalanisa ukwenza okwenziwayo noma ekupheleni ehlobo noma kwentwasahlobo. Ngalesi sikhathi, lesi sinambuzane ngenkuthalo ekhethekile kubeka imikhiqizo yayo amaqanda. Ngokwezazi ezithile zezinambuzane, ngemuva kokudla lomuntu onegciwane ukuze uthole ngaphakathi izibungu umkhiqizo futhi ezinye zazo uyasinda.
Izimuncagazi uqhubeke ukuthuthukiswa yabo isivele ngaphakathi. Aya indle, kodwa ngalesi sikhathi ngaphandle ukungakhululeki, umuntu uthola "isipho" Bachamusele amaqanda Ascaris, athwala impukane ku imilenze yakhe. Ukuze ukukukhuthaza begeza noma ukudla thermally kusetshenzwe, ngokwanele, mhlawumbe, ukuthi omunye amagciwane anjalo ifinyelela ngamasentimitha amane futhi sibekela amaqanda ezingamakhulu amabili usuku olulodwa!
Mayelana izimpethu elimhlophe bathi igama ...
Isithombe Yiqiniso, esabekayo. Kodwa kuvela, izimpethu umuntu ongakhonza futhi bazuze. Ucwaningo baye bafakazela ukuthi lezi izimuncagazi labo abazokwazi uma isetshenziswa ngendlela efanele, hhayi kuphela ukuphulukisa ebusweni isilonda, kodwa futhi ukusheshisa ukuphulukiswa izikhathi eziyishumi!
Eqinisweni, le ndaba eqanjiwe kusho ukwelashwa elisetshenziswa ezibhedlela ehola of Great Britain ne-United States, iye yasetshenziselwa ngisho ngesikhathi seMpi yoMhlaba yesiBili. Nokho, lapho kufika kwamaphilisi kwaholela bayakhohlwa indlela ephumelela kangcono.
Kuyini? Izimpethu ungathinti inyama ephilile futhi udle iziguli kuphela (necrotic). Kulokhu, isidingo semithi elwa namagciwane, futhi ngokufanele uzobe ezidonswe inkinga ka sezidakamizwa (ukuzinza). Yiqiniso, kuyinto izimpethu oyinyumba, okumele asuswe isilonda ngaphambi imikhiqizo yabo imfucuza kuyoba ngaphakathi.